ရေးသားသူ အောင်ဦး ရေးသားချိန် 17.10.08
မောင်လေးရယ်... အချစ်ဆိုတာကို တရားနဲ့ယှဥင်္ပြီး ရေးထားတာ မှတ်သားစရာကောင်းပါတယ်။ တကယ်တော့ ချစ်တတ်ဖို့ပဲ လိုပါတယ်။း)
ချစ်ခင်စွဲလန်းမှုရဲ့နောက်မှာ မချစ်တဲ့ရင် အပ္ပါယ် ဆိုတာကြီးက ကပ်လိုက်လာတယ်။
လောကမှာ ပါရမီ ဖြည့်ဘက် တွေဟာ စိတ်တူကိုယ်တူဖြစ်ရင်
နှစ်ယောက်လုံး က သဒ္ဓါ၊ သီလ၊ စာဂ ပညာအရာ
မှာ ပြည့်စုံ တူညီနိုင်ရင် အင်မတန်ကောင်းပါတယ်။
လောက မှာ အချစ်ကိုတရားနဲ့ လည်းချစ်တတ်ဖို့လည်း လိုအပ်တယ်။ အချစ်နွဲထဲမှာ သတိလေးကပ်ပြီး ချစ်ကြရင် ချစ်နိုင်ကြရင် အကောင်းဆုံးပါပဲ...
ပို့စ်လေးက အကြံပေးစရာ၊လိုအပ်တာ ပြောစရာမရှိအောင်
ပြည့်ပြည့်စုံစုံ နဲ့တင်ပြပေးတော့ ပြောစရာမရှိပါဘူး
ကိုအောင်ဦးရေ... တကယ်ကို ကောင်းပါတယ်..
“သဒ္ဓါ၊ မေတ္တာရှေ့ရှုကာ ချစ်တာမြင့်မြတ်သည်။ သတိဉာဏ်ယှဉ် မုန်းတက်လျင် ၀ဋ်ခွင်လွတ်မြောက်သည်။ ဘ၀တိုင်းမှာ စောင်းမြောင်းကာ မဲ့တာကင်းပါစေ။ ဘ၀တိုင်းမှာ မူးယစ်ကာ သောက်တာကင်းပါစေ"
ညီမလေး လဲဒီလိုလေးပဲ ပြန်ဆုတောင်းပေးခဲ့ချင်ပါတယ်..
ဒီပိုစ့်လေးအတွက် ကျေးဇူးပါ အစ်ကို
မရဘူး။ အားလုံးကိုလည်း အချစ်မလျော့ဘဲ ကိုယ့်ကိုယ် ကို ရော သုစရိုက် လိုက်နာက ချစ်လို့ မရဘူး လား။ သိချင်လို့ပါ။
ဒီအကြောင်းလေးကို မောင်လေးရေးမယ် ဆိုကတည်းက ထူးခြားမယ်ဆိုတာ သိပြီးသားပါ။ အခုတော့ သီတင်းကျွတ်နဲ့လည်း အကိုက်ပဲ ဖြစ်သွားပါတယ်။ အားလုံး နားလည်သိမြင်သင့်ပြီး တန်ဖိုးလည်းရှိတဲ့ မှတ်သားစရာတွေပါပဲ အောင်ဦးရေ...
အချစ်လို့ ဆိုရာမှာ မေတ္တာဓာတ်များမယ်ဆိုရင် အားလုံးအဆင်ပြေမှာပါ၊ အပြန်အလှန်ထားရှိတဲ့ မေတ္တာများက ဖြူစင် ရှင်းသန့်လေ လောကမှာ နေလို့ကောင်းမှာပါမောင်လေးရေ။ အကိုင်အတွယ်မှားရင်တော့ ရင်နာစရာတစ်ပွေ့တစ်ပိုက်နဲ့ သောကလောင်မြိုက်တတ်ပါတယ်။ အချစ်ဖြင့် အရာရာကို အကောင်းအတိုင်းဖြစ်ပါစေ။
ဘဲလေ...အားလုံး အားလုံး သီးခံခြင်း ခွင့်လွတ်ခြင်း နားလည်ခြင်း
ရှိတဲ. ချစ်ချစ်လေးတွေနဲ့တွေ့င်္ကြု ဆုံဆည်းကြပါစေ
Good one fri!!
ညီမလေး သေသေချာချာ ဖတ်သွားပါတယ်...